Warbixintii ugu danbeysey Itoobiya iyo Hal bukaan oo COVID19 u dhintey. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixintii ugu danbeysey Itoobiya iyo Hal bukaan oo COVID19 u dhintey.
#Ethiopia: Hal bukaan oo # COVID19 ah ayaa dhintey. Haweeney 75 sano jir ah oo jogta #AddisAbaba oo lagu daweynayay isbitaal dhibaatooyin kale oo caafimaad oo raaga ayaa dhintey.
Dhibaato xagga neefsashada ah awgeed, waxaa lagu tuhmay inay fayraska qaadatay oo markii dambe la baaray. Si kastaba ha noqotee way dhimatay kahor inta natiijooyinka ay xaqiijin inay tahay bukaan qaba COVID-19.
Dhimashadeeda ayaa keenta tirada la xaqiijiyay ee dadka u dhintay fayraska afar. **** Warka la xiriira, shan (5) qof oo dheeri ah, oo ay ku jirto haweeneyda aan kor ku soo xusnay, ayaa laga heley markii laga baaray COVID-19 oo ka mid ah 1,047 tijaabooyin shaybaar 24-kii saac ee la soo dhaafay.
taasoo keentay tirada la xaqiijiyay inay gaarto 145. Laba ka mid ah 4 ayaa leh taariikh socdaal Gobolka Afrikada oo leh taariikh socdaal oo ka socota #Djibouti waxayna joogeen xarunta gobolka ee karantiilinta khasabka ah. Labada kale, waa gabar 8 sano jir ah, iyo haweeney 19 jir ah, waxay ka soo kala jeedaan Addis Abeba iyo Batu, oo ka tirsan #Oromia. Labaduba waxay leeyihiin raad raacyo xiriir la leh kiisas hore. Lix iyo toban (16) bukaan oo dheeraad ah ayaa sidoo kale soo kabsaday, taasoo ka dhigeysa tirada guud ee soo bogsashada 91.
Previous articleDawlada soomaaliya oo war kasoo saartey Diyaaradii dhacdey
Next articleKenya ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Soomaaliya